Amazwe ayingozi kakhulu kwezokuvakasha | Izindaba Zokuhamba
Amazwe ayingozi kakhulu kwezokuvakasha
UCarmen Guillen | | Amathiphu, Izaziso, Kukhuphuka
Njengoba kunikezwe imicimbi yamanje, uHulumeni waseSpain, ikakhulukazi IMinisterio de Asuntos Exteriores, ifune ukwenza impilo yesihambi ibe lula kancane ngokunikela nge imephu ebonisa amazwe ayingozi kakhulu wokubuka indawo usuku nosuku.
Sinikezwa ibalazwe lapho ubungozi bezwe ngalinye bukhonjiswa ngemibala. Siyihlukanise le mibala yaba ingqikithi ye- 4 amazinga esizobona ngokuningiliziwe ngezansi.
1 Ububanzi obukhulu bengozi
2 Ububanzi bezindawo ezithile okufanele uzigweme
3 Ibanga lokuqapha
4 Ububanzi obungakhawulelwe
Ububanzi obukhulu bengozi
Kuleli banga sithola i-15% yamazwe. Yilawo amnyama, ansomi futhi abomvu:
Umbala omnyama - ingozi yezinga le-10 Noma yini efanayo, "Ukuhamba kuyadikibala ngaphansi kwanoma yiziphi izimo": Lokhu kwenziwa ngamazwe ayisishiyagalombili esewonke, ikakhulu ngoba ayabandakanyeka ezimpini ezihlomile. Yilezi: Syria, Afghanistan, Somalia, Central African Republic, Mali neYemen. INepal nayo ikulolu hlu lokuba nengozi yokuzamazama komhlaba (ayinalo usongo lwamaphekula). I-oceanic Papua New Guinea ibhalwe endaweni yayo engazinzile.
Umbala onsomi - izinga eliyingozi 9, «abaseSpain banconywa ukuthi baphume lapho ngokushesha»: Lapha sithola kuphela i-Iraq neLibya, abangaxwayiswa ukuhamba ngaphandle kwesidingo esikhulu kakhulu, bese kuthi ngesincomo sokuyishiya ngokushesha.
Umbala obomvu - izinga eliyingozi 8, «ukuhamba kuyadikibala ngaphandle kwesidingo esibi kakhulu»: Kulolu hlu sithola inani lamazwe ayi-19, phakathi kwawo okukhona iHaiti, okuwukuphela kwezwe laseMelika kuleli banga; ithi eNyakatho Afrika (eTunisia naseGibhithe), nasenkabeni yezwekazi, njengeNigeria, iNiger noma iCongo, phakathi kwabanye. Singathola futhi amanye amazwe ase-Asia afana neNyakatho Korea, iPakistan neSaudi Arabia.
Ububanzi bezindawo ezithile okufanele uzigweme
Kuleli banga sithola ama-40% wamazwe. Eminye yile:
Umbala onsundu - izinga lesithupha lobungozi, «kunconywa ukuthi uhambe ngokukhulu ukuqaphela futhi uyeke ukwenza njalo ezindaweni ezithile»: I-Venezuela namuhla iyizwe eliyingozi kakhulu eLatin America ngenxa yezinga eliphakeme lokungavikeleki ngokusho kwale mininingwane. Ezingeni elifanayo yi-Ukraine, indawo yayo esempumalanga esangqubuzanayo; ITurkey, nomngcele waseSyria ulwa noMbuso WamaSulumane; nePalestine, ne-Gaza Strip enezinkinga. IThailand ibe yisisulu sokuhlaselwa ezindaweni zezivakashi, kanti iSri Lanka iwukuphela kwamazwe ase-Asia asezingeni eliphinde labuswa amazwe ase-Afrika, ayishumi esewonke.
Umbala wewolintshi - ingozi yesi-5, "hamba ngokuqapha okukhulu futhi uvikele izindawo ezithile": Kuleli zinga sithola konke, futhi akubhekiseli ezweni lonke kepha kubhekiswe ezindaweni ezithile ezicacisiwe ezifanayo. Sithola iJapane kulolu hlu njengengozi yayo yokuzamazama komhlaba, iNingizimu Korea ngomngcele wayo nombuso wasePyongyang, kanye neRussia ngeCaucasus yayo eyaluzayo. I-China ne-India nabo bayingxenye yalesi sigaba esiyindida. Kodwa-ke, iningi lamazwe angama-61 akulolu hlu kungenxa yobugebengu obukhona ezindaweni ezithile zawo. Lokhu kwenzeka emazweni aseLatin America afana neBrazil, Mexico, Peru noma iColombia. Futhi amanye amazwe aseYurophu afana neSerbia, Albania, Cyprus, Albania ne-Armenia.
Ngamazwe angama-25% esewonke, kulolu hlu sithola imibala emibili engahlukile kakhulu komunye nomunye:
Umbala we-Amber - izinga eliyingozi 4, «ukuhamba ngokuqapha okukhulu»: Kula mazwe azikho izindawo okufanele sizigweme njengakwezinye izimo ezedlule, kodwa kuyadingeka ukuthi uhambe ngokuqapha njalo ezweni lonke. Kunamazwe ayi-11 esewonke, ikakhulukazi ama-Afrika, afana neTogo noma iGhana. Kukhona nabantu baseCaribbean, njengeTrinidad neTobago, kanye nabase-Asiya abanjengoMalaysia. Banokuqapha okuphezulu okulingene ngenxa yezinga labo eliphezulu lobugebengu.
Umbala ophuzi - izinga eliyingozi 3, «ukuhamba ngokuqapha»: Kulolu hlu singathola ubugebengu obuphezulu kepha ngaphandle kwehaba. Sekukonke kunamazwe angama-37, okukhona kuwo iMorocco noma i-Equatorial Guinea. Futhi iChile noma i-Argentina, i-Ecuador ne-Uruguay phakathi kwabanye.
Futhi ekugcineni kufinyelela lapho singaphefumula khona ukukhululeka njengoba kungekho mkhawulo esimisweni esivimbela ukuhamba kulezi zindawo kalula (yize ngokombono wami, awazi ukuthi ingozi izoba kuphi). Sekukonke kungama-20% wamazwe:
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka - izinga loku-1 lobungozi, "ayikho imikhawulo yanoma yiluphi uhlobo yokuhambela amazwe alandelayo": I-United States, Canada, Australia, New Zealand kanye namazwe angama-35 aseYurophu yiqembu elinobungozi obuncane kakhulu. ITaiwan ukuphela kwezwe lase-Asia ebangeni elinabamele base-Afrika noma baseLatin America.
Noma kunjalo, i- UMnyango Wezangaphandle uphawule ezweni ngalinye imininingwane elandelayo: "Kukhunjulwa ukuthi njengamanje asikho isifunda emhlabeni futhi alikho izwe eliphephile ezenzweni zamaphekula."
Sibheke ukuthi lolu lwazi lungasiza uma ufuna ukuthatha uhambo ezinsukwini noma ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, noma ngabe zonke izindlela zokuqapha zincane. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokuthi izwe elithile ohambela kulo likulolu hlu, qiniseka ukuthi uvakashela lesi sixhumanisi. Lapha uzothola lonke ulwazi olusha oludingayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amathiphu » Amazwe ayingozi kakhulu kwezokuvakasha
Ubungozi bokuzamazama komhlaba eNepal? Ngaphezu kweSpain noma i-US? Usekelaphi ekunikezeni lolo lwazi?
Imininingwane eqondile futhi evuselelwe evela ekhasini le-Ministry of Foreign Affairs kaHulumeni waseSpain. Sithembele kukho ukukunikeza le ndatshana. Lapha ungabona lonke ulwazi: http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
Amathiphu awusizo wokuhamba okuphephile nokuvikelekile
Izindawo ezinelanga ngoNovemba